Author Topic: နှစ်သက်မိသော သရော်စာများ (Read 38958 times)
« Reply #30 on: September 10, 2011, 01:43:36 PM »
၉၀ ရာနှုန်း ၉၀ ရာနှုန်း ၉၀ ရာနှုန်း
၉၀ % သော ယောက်ျားများဟာ တစ်စုံတစ်ခုသွားဝယ်ဖြစ်ရင်လည်း မိန်းမတို့ရဲ့ စေခိုင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။
၉၀ % သော ယောက်ျားများဟာ ယောက္ခမအိမ်ကို အလည်အပတ် မသွားချင်ကြဘူး။
၉၀ %က သွားဖြစ်ရင်လည်း ဇနီးကို မျက်နှာသာ ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။
၉၀ % သော ယောက်ျားများဟာ သူဌေးအိပ်မက်ကို မက်တတ်ကြတယ်။ ချမ်းသာရင် သားသမီးကလွဲလို့ အရာအားလုံးကို လဲပစ်ချင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယောက်ျား
၉၀ % က ဘယ်သူမှ မလဲဖြစ် ကြဘူး။
၉၀ % သော ယောက်ျားများဟာ မိန်းကလေးတွေနား ချည်းကပ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ကောင်းတဲ့ အပြုအမှုနဲ့ မိန်းကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်ရဖို့ မျှော်လင့်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့
၉၀ % က မျှော်လင့်ချက် မပြည့်ခဲ့ကြဘူး။
၉၀ % သော ယောက်ျားများဟာ တဏှာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့
၉၀ % က သူတို့ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ အထဲမှာ အိမ်က မိန်းမ ပါမနေဘူး။
၉၀ % သော ယောက်ျားများဟာ ကိုယ်လုပ်သမျှ အကောင်းချည်းလို့ ထင်ကြပေမဲ့
၉၀ % က မိန်းမတွေရဲ့ အပြစ်ပြောတာကို ခံရတယ်။
၉၀ % သော ယောက်ျားများဟာ မိန်းမကို ပစိပစပ်များတယ်လို့ ထင်ကြပေမဲ့
၉၀ % က အဲဒီ ပစိပစပ်ကိုပဲ နားထောင်နေရတယ်။
၉၀ % သော ယောက်ျားများဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို သိတယ်။ ဒါပေမဲ့
၉၀ % က ပြုပြင်လို့ မရခဲ့ဘူး။
၉၀ % သော ယောက်ျားများဟာ မိန်းမလှလေးကို မြင်ရင်
၉၀ % က သူဘယ်သူနဲ့ ဖြစ်နေလဲ။ ငါ မရလိုက်တာ နာသကွာဟု တွေးတတ်ကြသည်။
« Reply #31 on: September 12, 2011, 09:31:09 AM »
" မြန်မာပြည်မှာ နေရတာ ကောင်းတယ်။ "
မန်ကျည်းယို၊ ဇီးယို၊ မက်မန်းပေါင်း၊ဂွေးသီးချဉ်စပ်၊ရှောက်ပေါင်း ဘာစားမလဲ စားချင်တာစား။
လက်တွန်းလှည်းထဲထည့် အဖုံးမပါ ဘာမပါနဲ့ လေဓာတ်ရေဓာတ် နေဓာတ်ကို သဘာဝကျကျ ရယူထားတဲ့ မြန်မာကြိုက် သွားရည်စာလေးတွေ။
ဘာမဆလာတွေသုံး၊ ဘာ အရောင်တင်မှုန့်တွေသုံး၊ ဘာ ငံပြာရည်တွေ သုံးထားလည်းတော့ မသိဘူး။
ချဉ်ငန်စပ် ရောင်းနေတဲ့လူရဲ့ ချွေးစက်တွေတောင် ပါချင်ပါဦးမှာ။
ဘယ်လောက် သဘာဝနဲ့နီး စပ်သလဲ။ နိုင်ငံခြားမှာရလို့လား။
တွေဝေမနေနဲ့ တရုတ်တန်းသွား တုတ်ထိုးလေးစားကြည့် လိုက်ဦး။
ဝက်တစ်ကောင်လုံး အမွှေးတောင် စားမရလို့ ချန်ထား ရတာ။ ဘာနဲ့ သေလို့ သေမှန်း မသိတဲ့ ဝက်တွေလည်း ပါချင်ပါဦးမှာပဲ။
အရသာ ရှိလေစွ။ မနေ့က တနေ့ကရောင်းမကုန် တဲ့ အသားတွေလည်း ရောထည့် မူးမူးနဲ့ တွယ်သာ တွယ်လိုက်။ ဘာမှတောင် သိလိုက်မှာ မဟုတ် ဘူး။
တုတ်ထိုးစားပြီး အဆီတစ် နေရင် လမ်းဘေးက ဖျော်ရည်လေးဝယ်သောက်လိုက်ဦး။
ဟိုကိုင်ဒီကိုင် ကိုင်ထားတဲ့ လက်လေးနဲ့ အားပါးတရ ညှစ်ဖျော် ထားတဲ့ သံပုရာသီး ဖျော်ရည်လေးကို ဘာရေနဲ့ လုပ်ထားမှန်း မသိတဲ့ ရေခဲနဲ့
ခပ်ဆဆမွှေ၊အခါတစ်သောင်းလောက် ဆေး ထားပြီးသား ခွက်ဆေးရည်နဲ့ ဆေးထားတဲ့ ဖန်ခွက်မှာထည့်။
ယင်ကောင်က တလောင်းလောင်းနဲ့ အဖတ်စစ်တဲ့ အဝတ်က ဘယ်နှစ်ရက် မလျှော်ဘဲထားတဲ့ လက်နှီးစုတ်မှန်း မသိဘူး။
ကြံတွေ ဘယ်က ယူလာသလဲ ဆိုတာလည်း ကြည့်လိုက်ဦး ခြေနင်းပတ်မှာ ပိုးလိုးပက်လက်။
မြေဓာတ်ကို အပြည့်အဝ ယူ ထားတာ။ ရလား စင်္ကာပူမှာ။
ကြာပါတယ် အဆင်ပြေတုန်း လက်သုပ်စုံလေးပါ ဆွဲလိုက်။
ကားတွေက ဘေးနားမှာ တဝီဝီ၊လက်တဝါးစာ ထိုင်ခုံပေါ်က ကျွံ ထွက် နေတဲ့ဖင် ကားနဲ့ မချိတ်မိရင် ကံကောင်း။
အမယ်ငရုတ်ဆီတွေများ ဘယ်သူက တားထားထား စားနေကြတာက တရွှဲရွှဲနဲ့ နီရဲနေတာပဲ။
နယ်ဖတ်နေတဲ့ လက်ကြီး ကြည့်ပြန်တော့ ဂျုံနယ်သမား လိုပဲ။
တခါနယ်ပြီးတိုင်း ပလုံဆိုဘေးနားက ရေပုံးခပ်စုတ်စုတ်ထဲ လက်ကို ဆင်းစိမ်လိုက်သေးတယ်။
ပြီးရင် ဂျီးဗလပွနဲ့လက်နှီးစုတ်ကို သုတ်တယ်။
ကံကောင်းရင် အန်တီ နှံ့နှံ့လေး နယ်ပေး နော်။
ဒါမှစားကောင်းတာဆိုတဲ့ သောက်ပျင်းထူထူ မိန်းမတွေကို စားရင်းသောက်ရင်း ငေးလို့ရသေးတယ်။ဒါပေမယ့် လည်း အဲလိုနေရာတွေ သိပ်ကြာကြာမနေနဲ့။
လူဗွက်ပေါက်နေတဲ့ လမ်းတလျှောက်ကြော်လှော်နေကြတဲ့ ဆီပူအိုးတွေ ဆီပူအိုးတွေ ဆိုတာ။
ဖိုင်နယ်ဒစ်စတီနေရှင်း နောက်ဆက်တွဲတွေ မြန်မာပြည်မှာ ရိုက်ကောင်း ရိုက်နေရဦးမယ်။
ကားပေါ်ကနေ ပြစ်ခနဲ ထွေးလိုက်တဲ့ ကွမ်းသွေးတွေ သလိပ်ဖတ်တွေ ထိနေမယ်။
လိုင်းကားလေးနဲ့ပြန်။ ကားနဲ့ ပြန်တယ်ဆိုပြီးတော့ ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်မကိုင်နဲ့ဦး၊ သူများရဲ့ပီကေဖတ်တွေ၊ ချွဲတွေ လက်မှာ ပေကုန်မယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ညဘက် အင်စတန့်ကော်ဖီလေးလည်း သောက်လိုက်ဦး။ ဘာဓာတ်တွေ ဘယ်လိုအချိုးနဲ့ ပါနေမှန်းတော့ မသိဘူး။
သောက်ကောင်းတာပဲ။ သေကာမှ သေရော။
ကြော်ငြာထားတာတွေကလည်း အလွန်။ မျိုမချပါနဲ့ငုံထားပါ ဆိုလား ဘာလား။ ထားတော့ ကော်ဖီမကြိုက်ရင် ဘီယာဆိုင်သွား။
မထူးဘူး လင်းလင်းချင်းချင်း ရှိတဲ့ ဘီယာဆိုင် လေးသွားပြီး အချိန်ဖြုန်းလိုက်။တစ်ခွက် ၇၀၀ သောက်လိုက်စမ်းပါ ၆ခွက်လောက်တော့။ ဘာအရေးလဲ။ အသားကင်တွေ စားရင်ကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတာ မိုးလုံးပြည့် မုသာဝါဒတွေပဲ ဖြစ်မှာပဲ။
ဒီတော့ ဝက်နံကင်လေး၊ကြက်ဖင်ဆီဖူးကင်လေး၊ ငါး ကင်လေး နဲ့ ဆွဲပစ်လိုက်။
အချိန်မတော် ပြန်လာလို့ အိမ်ကတံခါးမဖွင့်ပေးဘူးလား။
အနှိပ်ခန်း သွားအိပ်လို့ ရသေးတယ်။
မှိုလိုပေါက်နေတာ ဘာအရေး လဲ။
ဝါသနာပါရင် ဝါသနာပါရင်.. အင်း အခန်းထဲ ထမင်းဟင်း မှာစားလို့ ရသေးတယ်လို့ပြောမလို့။
ကဲ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး စာအုပ် လေးဖတ်ရင်း ခံတွင်းလေးဟာလာရင် လက်ဖက်သုတ်လေးဝါးချင်ဝါးလို့ ရသေးတယ်။
အောင်မလေး ဆိုးဆေးတွေ စိမ်ဆေး တွေဆိုတာ အခုမှ ကြောက်နေကြတာ ကိုယ့်လူ။
တမြန်နှစ်က ကျုပ်ကြီးတော်ကြီး သေတုန်းက ဘာမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး။
ဒီလိုပဲ ဘာမှမသိသေးတော့ သေရိုးသေစဉ်ပေါ့။
မြေချတော့တောင် သူကြိုက်တတ်တဲ့ လက်ဖက်လေးထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်။ လက်ဖက်သားလေးတွေဆိုတာ ဝင်းလို့။
အညွန့်လေးတွေဆိုတာတောင့်လို့ ကော့လို့။ အလောင်းပြန်တူးပြီး တရားစွဲရ အခုဆို နိုင်ချင်နိုင်ဦးမှာပ။
Credit to ( မူရင်းရေးသားသူ ဖော်ပြမထား၍ ထိုသူကိုပဲ ရည်ရွယ်ပါသည်။ )
« Reply #32 on: September 15, 2011, 09:38:31 PM »
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရဲ.၀န်ဆောင်မူတွေကို တော်တော်ဒေါသထွက်ပေါက်ကွဲနေတဲ့ ဂျာမာန်စစ်ဗိုလ်ချုပ် ဟစ်တလာရဲ.မူဗီပါ
« Reply #33 on: September 16, 2011, 07:04:32 AM »
Quote from: lu soe lay on September 15, 2011, 09:38:31 PM
မကြည့်ရသေးသူများအတွက် လင်ခ် အောက်မှာဗျာ
« Reply #34 on: September 20, 2011, 08:01:59 AM »
ယောက်ျားတွေ ဘာကြောင့်လိမ်ပြောကြ တာလဲ ?
ဘာ့ကြောင့် ..... ဘာ့ကြောင့်.... လိမ် ရတာလဲ ....အောက်တွင် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ ခင်ဗျား။ .......
တနေ့ သောအခါ သစ်ခုတ်သမား တစ်ယောက် သည် မြစ်ကမ်းနဘေးရှိ သစ်ပင်ကိုခုတ်ရင်း အရှိန်လွန်ကာ ပုဆိန် ရေထဲသို့ ပြုတ်ကျသွားလေသည်။
ပြန်ရှာမရတဲ့အဆုံး.. သစ်ခုတ်သမားလဲ ၀မ်းနည်းစွာ ငိုကြွေးလေ၏…
ထိုအခါ မြစ်စောင့်နတ် ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီး..
မြစ်စောင့်နတ် - ဘာကြောင့် များငိုနေရတာလဲ အသင်လူသား
သစ်ခုတ်သမား – ကျွန်တော့် ပုဆိန် ရေထဲပြုတ်ကျသွားလို့ပါ.. ထိုပုဆိန်နဲ့ပဲ ကျွန်တော် သက်မွေးရတာပါ အရှင်.. အသစ်လဲမ၀ယ်နိုင်ပါဘူး…
ဟုအမှန်အတိုင်းဖြေလိုက်တော့ မြစ်စောင့်နတ်လဲ ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ပြီး ..
ခဏအကြာ ရွှေပုဆိန် နဲ့ ပြန်ရောက်လာပြီး
သစ်ခုတ်သမား – မဟုတ်ပါဘူး
ထိုအခါ မြစ်စောင့်နတ် လဲ ငွေပုဆိန်ကိုပြပြီး
ထိုအခါ မြစ်စောင့်နတ်လဲ သံပုဆိန်ကို ပြပြီး
သစ်ခုတ်သမား – ဟုတ်ပါတယ် ..ကျွန်တော်မျိုး ပုဆိန်ပါ
ဟုဖြေလိုက်သော် မြစ်စောင့်နတ် လည်း ကျေနပ်ပြီး သစ်ခုတ်သမား ၏ ရိုးသားမှုကို အသိအမှတ်ပြုသော အားဖြင့်
ကာလအတန်ကြာသော် ထိုသစ်ခုတ်သမား တို့ လင်မယားသည် မြစ်ကမ်းနဘေးတွင်လမ်းလျှေက်နေစဉ် သူ၏ဇနီးမှာ ခြေချော်ပြီး ရေထဲသို့ပြုတ်ကျသွားလေသည်…
သစ်ခုတ်သမား – ကျွန်တော့်မိန်းမရေထဲပြုတ်ကျသွားလို့ပါ အရှင်
ခဏအကြာ “တင်ဇာဝင့်ကျော်” နဲ့ ပြန်ရောက်လာပြီး
သစ်ခုတ်သမား – ဟုတ်ပါသည် အရှင်နတ်မင်းကြီး
ထိုအခါမြစ်စောင့်နတ်လဲ ဒေါသထွက်ပြီး .. “သင် လိမ်ပေသည် မမှန်စကားကိုဆိုလေသည်”
“ခွင့်လွတ်ပါ.. အရှင် နတ်မင်းကြီး … ကျွန်တော်လိမ်ချင်လို့ လိမ်ရခြင်းမဟုတ်ပါ…အကယ်၍ “တင်ဇာဝင့်ကျော်” ကို ကျွန်တော့် မိန်းမ မဟုတ်ပါဘူး ဖြေလိုက်သော် ..
နတ်မင်းကြီး လည်း “မိုဟေကို” ကိုပြပေလိမ့်မည်… အကယ်၍ “မိုဟေကို” ကို ကျွန်တော့် မိန်းမ မဟုတ်ပါဘူး ဖြေလိုက်သော် ..
နတ်မင်းကြီး လည်း ကျွန်တော် မိန်းမ ကိုပြပေလိမ့်မည်…
ထိုအခါ ကျွန်တော်မျိုးက အမှန်အတိုင်း ဟုတ်ပါသည် ဟုဖြေသော်
အရှင်နတ်မင်းကြီး က ကျွန်တော့်ကို မိန်းမသုံးယောက်စလုံးပေးပေလိမ့်မည် …။
အရှင်နတ်မင်းကြီး ကျွန်တော်မျိုးသည် အလွန်ဆင်းရဲ ပါသည် ထိုကြောင့် ဘယ်လိုမှ မိန်းမသုံယောက်ဝမ်းဝအောင် ရှာမကျွေးနိုင်ပါ ..
ထိုကြောင့် “တင်ဇာဝင့်ကျော်” ကို ကျွန်တော့် မိန်းမ ပါဟု ဖြေလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ”
ထိုအခါ မြစ်စောင့်နတ် လဲ လွန်စွာ ကျေနပ်ပြီး သစ်ခုတ်သမား ၏ ရိုးသားမှုကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မိန်းမသုံးယောက်လုံး ကိုပေးပြီး
အသက်စာ စာမကုန်သော စည်းစိမ်တို့ကို ပါပေးလိုက်လေသည်.. ။
ဤ ပုံပြင်လေး ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ … ယောကျာ်းမျာ လိမ်ပြောသည်ဆိုရာတွင် လိမ်ချင်၍ မဟုတ်ပဲ….
လက်ရှိ ပကတိ အခြေအနေအရ ရိုးသားစွာ လိမ်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း …..
“အဖြူရောင် မုသား” များသာဖြစ်ကြောင်းသိစေလို၍ ဖြစ်ပါသည် …..
(သဘောတူသော ကျောင်းတော်သားများ ဩဘာပေး ဗုတ်ကြပါခင်ဗျား။ )
« Reply #35 on: September 30, 2011, 04:15:52 PM »
(ရေးသူ မသိ၊ ဖော်ဝဒ်မေးလ်)
ဒို့ပြည်မြန်မာ အိမ်တကာ ကွန်ပျူတာ ရှိပါစေ......
မရှိသူများ ဆိုင်မှာသွား တော်ကီ (talking) ပွားနိူင်စေ...။
ပီစီ (PC) တစ်လုံး ကိုယ်စီသုံး ရွှင်ပြုံးကြပါစေ....
ပီစီ (PC) ၏ ရန် ဗိုင်းရပ်(စ်)ဒါဏ် တွန်းလှန်နိူင်ပါစေ.....။
“ အွန်လိုင်း” တက်လာ များသူငါ “ကြူ” နိုင်ကြပါစေ.....
“ ကြူ သူ”တိုင်းဟာ အမြဲသာ ရင်ထဲရှိပါစေ။
“chatting” ထိုင်စဉ် ပြုံးပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေ....
“ချက်ချိန်”တိုင်းတွင် အမြဲပင် “ကွန်နက်ရှင်” (connection) ကောင်းပါစေ။
“ ဘလော့ဂ် ” ရောက်လာမိတ်သဟာ ကျန်းမာကြပါစေ...
စပ်မိစပ်ရာ ဗလချာ ....ရေးနိူင်ကြပါစေ....။
“ ဘလော့ဂ်ဂါ ”အချင်းချင်း ရန်စောင်ခြင်း လွတ်ကင်းကြပါစေ.....
“ ချိန်း၊ချက် ” ရန်ရှာ၊ ပြဿနာ...ရှောင်နိူင်ကြပါစေ...။
ခြိမ်းခြောက်လိုချင်း အချင်းချင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ....
ဒို့ မေတ္တာစွမ်း နှစ်ခါနမ်း... (အာ...ရောကုန်ပီ sorry) ကမ္ဘာလွှမ်း အေးချမ်းကြပါစေ....။
« Reply #36 on: October 22, 2011, 05:27:14 PM »
၁။ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ များထက်သာ ဒို့မြန်မာ
၂။ မျိုးကောင်းသားများ မွေးဖွားရာ ဒို့မြန်မာ
၃။ ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၄။ ကူညီဖို့ရာ လက်မနှေးတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၅။ အညှိုးအတေးမကြီးတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၆။ အမှတ်မရှိ သနားတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၇။ အမြဲလိုလို အားနာတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၈။ ဘာတွေဖြစ်ဖြစ် ပြုံးနေတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၉။ ရှေ့နောက် မတူ အလယ်ထိုင်လွဲ ဇွဲမလျှော့တာ ဒို့မြန်မာ
၁၀။ အမှားအမှန် မဝေဖန် ခေါင်းငုံ့ခံတာ ဒို့မြန်မာ
၁၁။ နဲနဲလုပ်ငြား များများကြွား မှတ်သား ဒို့မြန်မာ
၁၂။ ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ မှတ်ယူ ဒို့မြန်မာ
၁၃။ သူများကောင်းစား မနာလိုပွါး ဒို့မြန်မာ
၁၄။ သူများအပေါ်ကောင်း အချင်းချင်းထောင်း ဒို့မြန်မာ
၁၅။ မဆင်ခြင်ပါ အထင်ကြီးတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၁၆။ ဘယ်လိုနှိပ်စက် မနာတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၁၇။ ရှိရှိ မရှိရှိ ကြွားဝါတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၁၈။ သာပေါင်းညာစား ပြောဆိုတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၁၉။ ဟို ဒီ အကြောင်းပြ အပျင်းကြီးတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၂၀။ ရာထူးဂုဏ်သိမ် အလွန်မက်တာ ဒို့မြန်မာ
၂၁။ ရိုးသားသူများ လူ့ငနွား အခေါ်ခံရတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၂၂။ လေယာဉ်ပျံ ပိုင်ရှင်များပေါ်လို့လာ အဲဒါဒို့မြန်မာ
၂၃။ ခရက်ဒစ်ကဒ် မသုံးပါ လက်ငင်းရှင်းတာ ဒို့မြန်မာ
၂၄။ ဟန်းဖုန်း ၁လုံး ၁သန်းနီးနီးတန်တာ ဒို့မြန်မာ
၂၅။ ပုခုံး အပွင့်ရှိမှ အလုပ်ဖြစ်တာ ဒို့မြန်မာ
၂၆။ တံခါးဖွင့်စီပွါး ကျင့်သုံးကာ ရေ တွေလောင်းရတာ ဒို့မြန်မာ
၂၇။ ကပ်ပွါးသမားများ ချမ်းသာတာ ဒို့မြန်မာ
၂၈။ စက်မှုဇုံထုတ် ကားဟောင်းများ ဈေးကောင်းရတာ ဒို့မြန်မာ
၂၉။ တိုရိုတာက ရွှေပြည်သာ ဖြစ်တာ ဒို့မြန်မာ
၃၀။ ဝစ်သောက်ကားများ ဝန်ကြီးကားဖြစ်လာတာ ဒို့မြန်မာ
၃၁။ လိတ်တက်ကားစီး ဝန်ကြီးသားသမီး ဒီလိုဖြစ်တာ ဒို့မြန်မာ
၃၂။ လူကြီးအမျိုးများ ကောင်းကောင်းဝါး စားပိုးနင့်တာ ဒို့မြန်မာ
၃၃။ စီးပွါးဖြစ်ရာ လိုက်လုပ်တတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၃၄။ ပိုက်ဆံဈေးကျ သုံးမရ အပြုံးမပျက်တာ ဒို့မြန်မာ
၃၅။ စီးပွါးပိတ်ဆို့ အမေရိကန်တို့ ဂရုမစိုက်တာ ဒို့မြန်မာ
၃၆။ ရပ်ကွက် ၁ခု ပတ်၃ခု ဖွင့်လို့ဖြစ်တာ ဒို့မြန်မာ
၃၇။ တောင်သူလယ်သမား ဘိန်းစိုက်စား စီးပွါးတက်တာ ဒို့မြန်မာ
၃၈။ လူတွေပေါ်များ အလုပ်ရှား နိုင်ငံခြားသွား အလုပ်သမားဖြစ်လာ ဒို့မြန်မာ
၃၉။ ချမ်းသာသူများ အလုပ်မရှား စီးရီး ထုတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၄၀။ ပညာတတ်များ ထောင်ပို့ထား ဒို့မြန်မာ
၄၁။ ဖတ်တတ်ရုံလေး သင်ကာပေး ဆိုးရွားနေတာ ဒို့မြန်မာ
၄၂။ ဘွဲ့ရသော်ငြား အလုပ်ရှား မှတ်ထားအဲဒါ ဒို့မြန်မာ
(မှတ်ချက် အချစ်တက္ကသိုလ် ကဘွဲ့ရလျှင်တော့ အလုပ် မရှားပါခင်ဗျား။)
၄၃။ ၁၀တန်းအောင်များ နိုင်ငံခြားသွား တက္ကသိုလ်မတက်တာ ဒို့မြန်မာ
၄၄။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား မှန်ခဲ့ငြား ဖဲရိုက်တတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၄၅။ တနှစ်ဆယ်ရက် အဝေးသင်တက် အောင်ချက်ကောင်းတာ ဒို့မြန်မာ
၄၆။ သမိုင်းကြောင်းများ ပုံပြင်အလား သင်ကြားကြတာ ဒို့မြန်မာ
( ခံစားချက် တူကြမယ်ဆိုလျှင် ဩဘာပေးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား။ )
« Reply #37 on: October 27, 2011, 01:43:57 PM »
Quote from: ဖရာရှက် on October 22, 2011, 05:27:14 PM
၄၇။ ၁နေ့ ၂ခါ ၂လုံးရောဂါ အမြဲဖြစ်တာ ဒို့မြန်မာ
၄၈။ ဆေးဝါးမရှိပါ နိုင်ငံအဝှမ်း ဆေးရုံမှာ ဒို့မြန်မာ
၄၉။ A ကိုက်သူများ ပေါကြွယ်လာ ဒို့မြန်မာ
၅၀။ ဘော်လုံးကန်ပွဲ သောက်ရှက်ကွဲလဲ စိတ်မနာနိုင်တာ ဒို့မြန်မာ
၅၁။ ဘော်လုံးပွဲမှာ အမြဲသာ စောက်တလွဲဖြစ်တာ ဒို့မြန်မာ
၅၂။ ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားရာ ဒို့မြန်မာ
၅၃။ ကျောင်းကန်ဘုရားပေါလှတာ ဒို့မြန်မာ
၅၄။ အလှူဒါန ရက်ရောတာ ဒို့မြန်မာ
၅၅။ နေရာတိုင်းလို လှုစေလို ကောက်ခံတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၅၆။ ကိစ္စပြီးအောင် အရက် လက်ဆောင် ကန်တော့ရတာ ဒို့မြန်မာ
၅၇။ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားကောင်း ချဲအတိတ်ကောက်တတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၅၈။ ချဲပေါက်ဖို့အကြောင်း ဆုတွေတောင်း ဘုရားကိုပါ နားငြီးစေတာ ဒို့မြန်မာ
၅၉။ ​‌​နတ်ပန်းမညှိုး ဘုရားပန်းညှိုး စင်းစားစရာ ဒို့မြန်မာ
၆၀။ ကြွားဝါဖို့အရေး အလှုပေး ယဉ်ကျေးလိမ္မာ ဒို့မြန်မာ
၆၁။ ဗေဒင်စကား ထင်ယောင်မှား ယတြာခြေတာ ဒို့မြန်မာ
၆၂။ များများလှုမှ နိဗ္ဗာန်ရ ထင်ကြ ဒို့မြန်မာ
၆၃။ လော်နဲ့အော်မှ စိတ်တိုင်းကြ ဓလေ့ဖြစ်လာ အဲဒါ ဒို့မြန်မာ
၆၄။ လှူယောင် ဟန်ထွင် သရုပ်ပြင် ပေါ်တင်လုပ်တတ်ကြတာ ဒို့မြန်မာ
၆၅။ ကူညီသယောင် အယောင်ဆောင် မျက်နှာပြောင်တာ ဒို့မြန်မာ
၆၆။ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် အကုန်တတ် ဆရာများတာ ဒို့မြန်မာ
၆၇။ မသိလဲ လက်ခံ နားမလည်လဲ ပြန်မမေး ခေါင်းညှိတ်လက်ခံ လမ်းကြောင်းမှန်လို့ မှတ်သားတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၆၈။ ရုံးကိစ္စများ အခါခါသွား ပွဲစားရှိမှ အဆင်ပြေကြ အဲဒါ[/color] ဒို့မြန်မာ
၆၉။ စစ်ကားရိုက်သွား သရုပ်ဆောင်များ အကယ်ဒမီရတာ ဒို့မြန်မာ
၇၀။ မီးမလာပဲ အမှောင်ထဲ ဖဲရိုက်တတ်ကြတာ ဒို့မြန်မာ
၇၁။ ယဉ်ကျေးမှုလဲ မြင့်ခဲ့ဘူးတာ ဒို့မြန်မာ
၇၂။ ၂၄နာရီ မီးပျက်သော်လဲ မမှုပဲ ဖြစ်သလိုနေခဲ့တာ ဒို့မြန်မာ
၇၃။ ပိုက်ဆံတောင်းတာ ဝန်ထမ်း အကျင့်ဖြစ်နေတာ အဲဒါ ဒို့မြန်မာ
၇၄။ ရုံးဝန်ထမ်းတွေ လက်ဖက်ရည်သောက်တာ (အကို လက်ဖက်ရည်ဖိုးလေး မ စပါဦး) အဲဒါလဲ ဒို့မြန်မာ
၇၅။ အသင်းဖွဲ့လဲ စိတ်ဝမ်းကွဲ ကြာကြာမမြဲတာ ဒို့မြန်မာ
၇၆။ သင်္ကြန်တွင်းဆို အသေပျော်တာ ဒို့မြန်မာ
၇၇။ ဝက်ဆိုဒ်အများစု အဘမ်းခံရတာ ဒို့မြန်မာ
၇၈။ တီထွင်ခံစား မရေးအား ကော်ပီသီချင်းများ ဆိုတာ ဒို့မြန်မာ
၇၉။ ဗီဒီယို ၁ကား ၃ရက် နဲ့များ ခံစားရိုက်ထုတ်နိုင်တာ ဒို့မြန်မာ
၈၀။ ဘတ်စကားပေါ် အထောက်တော် အလွန်ပေါ်များနေတာ ဒို့မြန်မာ
၈၁။ လမ်းဘေးတိုင်းမှာ ဆိုင်ကွမ်းယာ တွေ့မြင်ရတာ ဒို့မြန်မာ
၈၂။ တောင်းစားသူများ လွန်ပေါများ နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နိုင်တာ အဲဒါ ဒို့မြန်မာ
၈၃။ လက်ဖက်ရယ်ဆိုင် ကြည့် ကြည့်ပါ အချိန်မရွေး စည်ကားဆဲ အဲဒါလဲ ဒို့မြန်မာ
၈၄။ လက်ညှိုးထိုး မလွဲသွား ဘီယာဆိုင်များ လူအမြဲမပြတ်နေတာ ဒို့မြန်မာ
၈၅။ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် စပိမကောင်းတာ ဒို့မြန်မာ
၈၆။ ချစ်ကြိုက်ကွဲညားဇာတ်လမ်းများ မရိုးအီပဲ အားပေးနိုင်တာ ဒို့မြန်မာ
၈၇။ ကိုရီးယားကား ဇာတ်လမ်းများ ကြီးငယ်မရွေး အချိန်တိုင်းအားပေးတာ ဒို့မြန်မာ
၈၈။ ကူးခွေထွက်တော့ မတရား ကွန်ပြူတာဆော့ဝဲ အလကားသုံးတော့တရားတတ်တာ ဒို့မြန်မာ
၁၀၀။ ဟီး အချစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား မို့သိဘူးဗျာ
« Reply #38 on: November 05, 2011, 07:52:35 AM »
လူငယ်တွေထဲက ဟာသာ အတိုအထွာ
(သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ စာသားအား သမလာပါသည်၊ အားမနာ လျှာမကျိုး ဝေဖန်နိုင်ကြပါသည်)
:-\_ဘ၀ဆက်တိုင်း..... အင်္ဂလန်မှာ ဘောလုံး သမား...
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ လူကြီးသား
"ကတုံး တုံးပြီး တောထွက်မယ် ဆိုတော့လဲ တောက ပြုန်းနေပြီ...
အင်းလေးကန်ထဲခုန်ချပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမယ် ဆိုတော့လဲ.... ရေက မရှိ
shockရိုက်ပြီး suicide လုပ်မယ် ဆိုတော့လဲ မီးက မလာ...၊
ဆေးဝယ်သောက်ပြီးကိစ္စတုံးမယ် ဆိုတော့ အတုဖြစ်နေ...."
လမ်းကြောင်းလာတဲ့ အချိန်မှာ လမ်းပိတ် ရပ်နေလိုက် အသေ တိုက်သတ်လိမ့်မယ်၊
မသေသေး ဘူးလား မပူနဲ့ သေနတ်နဲ့ဆင်းပစ်လိမ့်မယ် လို့
"“ပျော်ပျော်နေ သေခဲ … မော်တော်နေ ရေထဲ …
အိမ်မှာနေ အမေဆဲ … ရန်ကုန်မှာနေ ဗုံးကွဲ … နေပြည်တော်မှာနေ အသားမည်း …
အမြင့်ဆုံးကိုတက် အချစ်ဆုံးကို ဖက်ပြီး အော်လိုက်မယ် … မီးလာပြီ …
မီးလာပြီ … ဟေး”
« Reply #39 on: November 06, 2011, 12:35:02 PM »
ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာလူမျိုးများ မဟုတ်ကြပါ
ကျွန်ုပ်တို့ ယိုးဒယားဂျာ (့Yodayagya)လူမျိုးများသည် ထိုင်းနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်ချင်း ထိစပ်သော နေရာများတွင် အဓိက နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာလူမျိုးများနှင့် ရုပ်ချင်း ဆင်တူသလိုလို ရှိသော်လည်း မြန်မာပြည်သား၊ မြန်မာ လူမျိုးများ မဟုတ်ကြပါ။ လူမျိုးရေး အစွန်းရောက်သည့် racist ထိုင်းလူမျိုးများက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖမာ့ (မြန်မာလူမျိုး)ဟု လွဲမှားစွာ စွပ်စွဲ ပြောဆိုကြပါသည်။ ထိုင်းလွှတ်တော်တွင်လည်း ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးဟူ၍ မရှိကြောင်း မျက်စိ စုံမှိတ်ကာ ငြင်းနေကြပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်သော နိုင်ငံခြားသားများဟု ပြောနေကြပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးများ မရှိကြောင်း မည်သူမှ ငြင်းလို့မရပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ စက်ရုံအလုပ်ရုံ များစွာကို သွားကြည့်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးများကို တွေ့ရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုင်းများကသာ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုဖြင့် ဖမာ့ (မြန်မာလူမျိုး) ဟူ၍ မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုနေကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့ဝင်ရောက်လာသော မြန်မာလူမျိုးများ မဟုတ်ကြပါ။ ထိုင်းတို့က မလိုမုန်းထားစွာဖြင့် တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာသော နိုင်ငံခြားသား ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ (illegal migrant workers) ဟု မဟုတ်မှန် ပြောဆိုနေကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံတကာ ဖိအားကြောင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့ကို အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ယခုထက်တိုင် ထိုင်းနိုင်ငံသား အဖြစ် အသိအမှတ်မပြုကြပါ။ နိုင်ငံသား အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း မခံရဘဲ ဖိနှိပ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေကြရပါသည်။ အမှန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ယိုးဒယားဂျာ များသည် ထိုင်းလူမျိုးများ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ မ၀င်ရောက်မီ ထောင်စုနှစ်ပေါင်း များစွာကပင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြသော ကျောက်ခေတ်လူသားမှ ဆင်းသက်သည့် ဘူမိနက်သန် ထိုင်းတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်သောင်းဂဏန်း အချိန်ကပင် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ လန်ရုံရီယင်ဂူ၊ ၀ိဥာဉ်ဂူ အစရှိသော ဂူများတွင် ကျောက်ခေတ် လူသားများ အဖြစ် ဂူအောင်း နေထိုင်ခဲ့ကြသော ထိုင်းတိုင်းရင်းသား စစ်စစ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘိုးဘေး ကျောက်ခေတ် လူသား ယိုးဒယားဂျာများသည် ထိုင်းနိုင်ငံ သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်ရှိ ထိုင်းလူမျိုးဖြစ်သော လူသားစားသည့် သီရိအိုးခွက်ပန်းကန် ဘုရင်မကို တိုက်ခိုက် အောင်နိုင်ပြီးနောက် ပလက်တီနမ် တောင်ထိပ်နှင့် ပဏ္ဍိတ (ပန်တစ်ပလာဇာ) တောင်ထိပ်တို့တွင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ အရှေ့တောင်အာရှသို့ ကုန်သွယ် သွားလာသည့် အင်္ဂလိပ် သင်္ဘောများ ထိုင်းနိုင်ငံ ကမ်းခြေတွင် သင်္ဘောပျက်ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အင်္ဂလိပ်လူမျိုးများ အခြေချ ခဲ့ရာမှ ဒေသခံ လူမျိုးများနှင့် ရောနှောပြီး ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးများမှာ ဖမာ့ (မြန်မာလူမျိုး) မဟုတ်ဘဲ အင်္ဂလိပ်မှ ဆင်းသက်ကြောင်းကို သက်သေပြနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာသာစကားတွင် ခေါ်ဆိုသော မော်တော်ကား၊ တီဗွီ၊ အင်တာနက်၊ ကွန်ပျူတာ၊ ရေဒီယို ဆိုသည့် ဝေါဟာရများမှာ အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အင်္ဂလိပ်က ဆင်းသက်ကြောင်းကို မယုံနိုင်ဖွယ် မရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးများသည် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး မျက်နှာသွင်ပြင်များ မတူကြပါ။ မျက်နှာ ၀ိုင်းသူက ၀ိုင်းပြီး မျက်နှာ ပြားသူက ပြားပါသည်။ အချို့မှာ နှာခေါင်းရှည်ပြီး အချို့ နှာခေါင်းတိုပါသည်။ အချို့ အရပ်ရှည်ပြီး အချို့ အရပ်ပုပါသည်။ အချို့မှာ အသား ဖြူသော်လည်း၊ အချို့မှာ အသားညိုပြီး အချို့ အသားမဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့မှာ မြန်မာလူမျိုးက ဆင်းသက်လာသည်ဟု ပြောဆိုခြင်းမှာ လုံးဝ ယုတ္တိ မတန်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး၊ ပြင်သစ်လူမျိုး၊ စပိန်လူမျိုး၊ ဂျပန်လူမျိုး၊ တရုတ်လူမျိုး၊ ကိုးရီးယား လူမျိုး၊ တိဗက်လူမျိုး၊ ဗီယက်နမ်လူမျိုး၊ ထိုင်းလူမျိုး၊ ကမ္ဗောဒီးယားလူမျိုး၊ အိန္ဒိယလူမျိုးတို့ ရောနှောရာမှ ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ယိုးဒယားဂျာ ဘာသာစကားမှာ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ အိန္ဒိယ၊ မလေး၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အခြားသော လူမျိုး တစ်ရာ့တစ်ပါး၏ ဘာသာစကားများ ရောစပ်ရာမှ ဆင်းသက်လာခြင်း သာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာသာစကားရှိ ကွန်ပျူတာဟူသော အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ၊ ဆူရှီဟူသော ဂျပန်ဝေါဟာရ၊ အီကြာကွေး ဟူသော တရုတ်ဝေါဟာရ၊ ဘရာဇီယာ ဟူသော ပြင်သစ် ဝေါဟာရ၊ ပလာတာ ဟူသော အိန္ဒိယ ဝေါဟာရ၊ ဒူးရင်းသီး ဟူသော မလေးဝေါဟာရ၊ အရက်ဟူသော အင်ဒိုနီးရှား ဝေါဟာရများကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပြောဆိုသော ဘာသာစကားမှာ မြန်မာစကား မဟုတ်ကြောင်း သိသာ ထင်ရှားပါသည်။
လူအများက ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသော ဘာသာစကားမှာ မြန်မာစကား ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့မှာ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုကြခြင်းမှာ လုံးဝ မှားယွင်းပါသည်။ မြန်မာစကားနှင့် ဆင်တူသလိုလို ရှိသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြောဆိုသော စကားမှာ မြန်မာစကား မဟုတ်ပါ။ ယိုးဒယားဂျာလစ်ရှ် (Yodayagya'lish) သာ ဖြစ်ပါသည်။ ယိုးဒယားဂျာလစ်ရ်ှကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်က ကျွန်ုပ်တို့ တီထွင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘာသာစကားကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာဟု လူသိများသည့် ရောမအက္ခရာဖြင့် ရေးသားပါသည်။ အင်တာနက် ချက်တင်များတွင် ကြည့်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးများသည် မြန်မာဘာသာစကား မဟုတ်သည့် nay kaung lar ဟူသော ယိုးဒယားဂျာလစ်ရှ် ဘာသာစကားဖြင့် ပြောဆိုကြပါသည်။ အဆိုပါ ယိုးဒယားဂျာ စကားသည် မြန်မာစကား "နေကောင်းလား" နှင့် လုံးဝ တူညီမှု မရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖမာ့ (မြန်မာလူမျိုးများ) လုံးဝ မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုင်းလူမျိုးများကဲ့သို့ပင် ခေါက်ပေါင်စားပါသည်။ ကွစ်တီယို စားပါသည်။ ဂျင်းဘောင်းဘီ ၀တ်ပါသည်။ စကတ် ၀တ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာလူမျိုးနှင့် မတူပါ။ ထိုင်းလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ယိုးဒယားဂျာ ဟူသော လူမျိုးသည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသား (၁၆၂၂၂၈)မျိုး တွင် ပါဝင်ခြင်း မရှိကြောင်း ထိုင်းအစိုးရက ကြေညာထားပြီး၊ ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုး ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မရှိဟု ပြောနေကြပါသည်။ အမှန်မှာ ယိုးဒယားဟူသော ဝေါဟာရကို ၁၆ ရာစု မြန်မာရာဇ၀င်များတွင် အတိအကျ ဖော်ပြထားပါသည်။ ယိုးဒယား ဟူသော ဝေါဟာရ ဆင်းသက်လာသည့် အယုဒ္ဒယ ဟူသော ဝေါဟာရကို အေဒီ ၁၃၅၀ ခုနှစ်ကတည်းကပင် ထိုင်းနိုင်ငံ သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ရပါသည်။ ထိုင်းပညာရှင်များက ယိုးဒယားဂျာ ဟူသော ဝေါဟာရမှာ ၂၀၁၁ ရောက်မှသာ တီထွင်ဖန်တီးထားသော ဝေါဟာရဟု ပြောကြသော်လည်း အထက်ပါ သမိုင်းအထောက်အထားများအရ ယိုးဒယား ဟူသော ဝေါဟာရ ရှိခဲ့ကြောင်းကို မည်သူမျှ မငြင်းဆိုနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်း ၀င်ရောက်လာသော မြန်မာလူမျိုးများ မဟုတ်ကြပါ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး စစ်စစ် ဖြစ်သော ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခင်က ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့နေထိုင်ခဲ့ပြီး ထိုင်းများထက် လူဦးရေ များပြားပါသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်များ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ချိန်တွင် ထိုင်းအာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး လွန်ပီးပူ ဆွန်ဂရမ်က လူမျိုးတုန်းအောင် သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ယခုအခါ ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုး နှစ်သန်းခန့်သာ ကျန်ပါတော့သည်။ သန်းပေါင်း ၆၀ နီးပါးမှာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှ ထွက်ပြေးသွားကြရပြီး ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်လျက် ရှိကြပါသည်။ (ဤအချက်က ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကျွန်ုပ်တို့ ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးများသည် မြန်မာပြည်မှ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက် လာခြင်း မဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည်ရှိ မြန်မာလူမျိုးများသည်သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ မူလ နေထိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာပြည်သို့ ပြောင်းရွှေ့ သွားကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ခိုင်မာစွာ သက်သေပြနေပါသည်။) ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခင်က ထိုင်းနိုင်ငံ တ၀န်းတွင် လူဦးရေ အများဆုံး ဖြစ်သည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအဖြစ် နေထိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ် တစ်လျှောက်တွင်သာ အများစု နေထိုင်ကြသည့် minority ဘ၀သို့ ရောက်ရှိရပါတော့သည်။ အခြားသော ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးများမှာ စင်ကာပူသို့ အဓိက ထွက်ပြေးကြပြီး ပင်နီစူဠ တောင်ထိပ်တွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖိနှိပ်ခံရသည့် အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ညီအစ်ကို မောင်နှမ အများစုမှာ မလေးရှား၊ အမေရိကား၊ အင်္ဂလန်၊ သြစတြေးလျ အစရှိသည့် နိုင်ငံများသို့ ထွက်ပြေးသွားကြပါသည်။ သို့သော် မြန်မာအစိုးရက ကျွန်ုပ်တို့ကို မြန်မာဟု အသိအမှတ်မပြုပါ။ အသိအမှတ် မပြုသောကြောင့်သာ မြန်မာသံရုံးက ကျွန်ုပ်တို့ကို အကာအကွယ် မပေးဘဲ ငွေညှစ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ ကျွန်ုပ်တို့ ညီနောင်များမှာ နိုင်ငံမဲ့ လူမျိုး (stateless people) ဖြစ်နေကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို မြန်မာလူမျိုးများဟုလည်း မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုခြင်းကို ခံနေကြသည်မှာ လွန်စွာ မှားယွင်းပါသည်။
လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၂၀ ၀န်းကျင်က ကျွန်ုပ်တို့ ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးများကို ထိုစဉ်က အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် ထိုင်းအစိုးရက တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအဖြစ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတော် အသံလွှင့်ဌာန ဖြစ်သည့် Radio Thailand က ဥဒုံဌာနီ အသံလွှင့်စခန်းမှ တစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ လူမျိုးများ ပြောဆိုသည့် ဘာသာစကားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် ၁၅ မိနစ်စီ အသံလွှင့် ပေးခဲ့ပါသည်။ ရေဒီယိုမှပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘာသာစကားဖြင့် အသံလွှင့်ခဲ့သည်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး စစ်စစ် ဖြစ်ကြောင်း လုံးဝ သိသာ ထင်ရှားပါသည်။ ယခု racist အစိုးရများ အာဏာရရှိပြီး နောက်ပိုင်း မှသာ ထိုအစီအစဉ်ကို အသံ မလွှင့်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကို တိုင်းရင်းသား အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်လိုက်ပါသည်။
နောက်တက်လာသည့် ထိုင်းအစိုးရသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို နိုင်ငံခြားသား မြန်မာလူမျိုးများဟု သတ်မှတ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို ပြုလုပ်လျက် ရှိကြပါသည်။ လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်ခွင့် မရှိပါ။ အလုပ်သမားကတ် မပါလျှင် ဖမ်းဆီး ထောင်ချခြင်း၊ ငွေညှစ်ခြင်း၊ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများကို အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျက် ရှိပါသည်။ ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးများ တရားဝင် မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ အိမ်ရာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များ မရှိပါ။ ထိုင်းတောင်ပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းရင်းသား ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးများကို နိုင်ငံခြားသား မြန်မာများဟု မဟုတ်မမှန် သတ်မှတ်ပြီးနောက် ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်၊ စက်ဘီး စီးခွင့်များကို ပိတ်ပင်ထားပါသည်။ နယ်မြေကျော်ပြီး ခရီးသွားလာခွင့်များကိုလည်း ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ရက်စက်သော ထိုင်းအစိုးရသည် ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှုများလည်း ပြုလုပ်ပါသည်။ ယိုးဒယားဂျာ ရဟန်းသံဃာများကို ထိုင်းသာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနက နိုင်ငံခြားသားများ ဟု သတ်မှတ်ပြီး ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး ဖြစ်ခွင့် မပေးပါ။ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း ၉၀ ကျော်ကို ထိုင်းအစိုးရက အတင်းအကျပ် သိမ်းပိုက်ပြီး၊ ထိုင်းဘုန်းကြီးများကို ကျောင်းထိုင်ခိုင်းပါသည်။ ဘာသာရေး နှိပ်ကွပ်မှု ဖြစ်ပါသည်။ ဘုန်းကြီးများကို အတင်းအကျပ် မျက်ခုံးမွေး ရိတ်ခိုင်းခြင်းများ ပြုလုပ်နေပါသည်။ ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်တို့ ရဟန်းသံဃာများကို အ၀ါရောင် သင်္ကန်းများကို အတင်းအကျပ် ၀တ်ဆင်ခိုင်းပြီး၊ သစ်ခေါက်ဆိုးရောင် သင်္ကန်းများကို ၀တ်ဆင်ခွင့် မပြုပါ။ ဤသည်မှ ထိုင်းအစိုးရ၏ ဘာသာရေး နှိပ်ကွပ်မှုများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ယိုးဒယားဂျာ လူမျိုးများကို နိုင်ငံခြားသား မြန်မာများဟု သတ်မှတ်သည့် အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မဲပေးခွင့် မရရှိကြပါ။ နိုင်ငံရေး ပါတီများ ထူထောင်ခွင့်လည်း မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား စစ်စစ်များ ဖြစ်ကြသော်လည်း မြန်မာလူမျိုးများဟု မဟုတ်မမှန် သတ်မှတ် ခံနေရပြီး လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေကြရပါသည်။
(ဆောင်းပါးရှင် အာဏာဂျူးမှာ အထက်တန်းကျောင်းထွက် အရူးလက်မှတ်ရ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး၊ တံတားကလေး အရူးတက္ကသိုလ်မှ ဘီအေ(အရူး)ဘွဲ့နှင့် ရွာသာကြီး အရူးတက္ကသိုလ်မှ အမ်အေ(အရူး)ဘွဲ့များကို ရရှိခဲ့သည်။ ယခုအခါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အရူးများ တက္ကသိုလ်တွင် ပီအိပ်ခ်ျဒီ(အရူး)ဘွဲ့အတွက် သုတေသန စာတမ်းပြုစုနေပြီး အထက်ပါ ဆောင်းပါးမှာ အရူးလက်မှတ်ရ အာဏာဂျူး၏ သုတသန စာတမ်းမှ ကောက်နုတ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ အရူးများ၏ ပေါက်တတ်ကရ ထင်ရာမြင်ရာ ရေးသားချက်များကို တရားစွဲဆို၍ မရပါ။ )
« Last Edit: November 06, 2011, 12:39:20 PM by ivory »